Talata 23 Novambra 2021 – FJKM
Lioka 21. 20 – 28
Mila mampitony ny fontsika mandrakariva isika
Satria eo am-pelatanan’ny Tompontsika izay zava-mitranga rehetra (and 24)
Maminany izay zavatra mbola hitranga amin’I Jerosalema I Jesoa teto. Tanteraka tokoa izany tamin’ny taona 70 taorian’I Jesoa Kristy tamin’ny alalan’ny fanjakana Romana, izay namotika an’I Jerosalema. Voafetra ihany anefa izany fanjakazakan’ny Jentilisa tamin’ny vahoakan’Andriamanitra izany , satria Izy no mitantana ny fiainan’izao tontolo izao. Na dia manampatra fahefana aza satana dia tsy izy no mibaiko izao tontolo izao fa Andriamanitra Tompontsika. Manjazaka fotsiny I Satana.
Na dia mahatsiaro mijaly aza isika satria anjakazakan’ny olona tsy matahotra an’Andriamanitra dia aza manary toky, fa mbola ho faranan’Andriamantra io satria manana fahefana hanao izany Izy. Mety mbola alina fotsiny ny andro fa mbola ho avy ny maraina . Hoy ny Ohabolana 13 . 18 hoe :” Raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao”
2-Amin’izay zavatra ho avy amin’ny fiavian’I Jesoa Kristy indray (and 25 – 28)
Eto indray I Jesoa dia maminany izay hitranga amin’ny fotoana hiverenany indray. Mahatsiravina tokoa izay hitranga amin’izany , kanefa aza matahotra fa fifaliana ho antsika olon’I Kristy izany, satria fotoana hamaranana ny herin’ny ratsy sy fotoanan’ny fanavotana antsika. Avelao ny tsy matahotra Azy no hivadi-po, fa isika aoka hanantena amin’ny fo sy saina tony fa andro tsy ratsy amintsika Kristianina izany. Izao dia manomboka manamboatra saina amin’izany isika mba tsy ho tampoka satria tsy maintsy hisy izany.
Raha matahotra ny zavatra hitranga amin’izany isika dia sahy hangataka ve hoe : enga anie ka tsy ho avy ny andro farany ?